Progressive Voice Myanmar » ကိုဝေမိုးနိုင်၊ ကိုတေဇာဆန်းတို့နဲ့ တော်လှန်သင်္ကြန်အကြောင်း
Home People's Voices ကိုဝေမိုးနိုင်၊ ကိုတေဇာဆ...
People's Voices 357 Views
ကိုဝေမိုးနိုင်၊ ကိုတေဇာဆန်းတို့နဲ့ တော်လှန်သင်္ကြန်အကြောင်း
April 13th, 2021 • Author: Dr. Tayzar San (Mandalay) , Wai Moe Naing (Monywa) • 1 minute read
By VOA Burmese News
VOA – ကိုတေဇာဆန်းနဲ့ကိုဝေမိုးနိုင် VOA နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အရင်ဆုံး ကျနော်ကိုတေဇာဆန်းအဖြေနဲ့ စလိုက်ပါ့မယ်။ အခုဆန္ဒပြပွဲတွေတောက်လျှောက်မှာ ဖြိုးခွဲတာတွေကလည်း တော်တော်ရက်ရက်စက်စက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြိုခွဲနေပါတယ်။ ဒါကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေက ပိုသိပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ပြောစရမလိုပါဘူး။ ဆိုတော့ ဒီလောက်ထိရက်ရက်စက်စက်အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ် ဖြိုခွဲဖမ်းဆီးလုပ်နေတဲ့ကြားထဲက ခင်ဗျားတို့တွေ ဘယ်လိုသတ္တိမျိုးနဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဆက်လုပ်နေတာလဲဗျာ့? မကြောက်ကြဘူးလား ကိုတေဇာဆန်း?
ကိုတေဇာဆန်း – အဲ့တော့ အကိုရာ ဟိုပေါ့၊ သတ္တိဆိုတာထက် ကျနော်က ဒီနေရမှာ ဘာပြောချင်သလဲဆိုတော့ ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်လို့ပဲ ကျနော်ပြောချင်တယ်။ ကျနော်တို့က ဘာကိုယုံကြည်လို့ ဒီအရေးတော်ပုံကိုဆင်နွှဲနေသလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့က အာဏာသိမ်းမှုဆိုတဲ့ အဓမ္မလုပ်ရပ်ကို ကျနော်တို့ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့မရဘူး။ ကျနော်တို့က ဒါကို လက်ခံလိမ့်မယ်၊ ဒီအာဏာသိမ်းတာကို ကျနော်တို့က ခေါင်းငုံ့ဒူးထောက်အရှုံးပေးလိမ့်မယ်၊ ဒီတိုင်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တွေတွေဝေဝေနေလိမ့်မယ်ဆိုရင်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂါတ်အတွက် အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့လူငယ်တွေ၊ နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့ ဒီအနာဂါတ်တခုလုံးကို ဒုက္ခပင်လယ်ဝေစေမဲ့လုပ်ရပ်ကြီးကို ကျနော်တို့ကခေါင်းငုံ့အရှုံးပေးသလိုဖြစ်သွားမှာ ကျနော်တို့လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီယုံကြည်ချက် ဒီရပ်တည်ချက်ကြောင့် ကျနော်တို့က ဒီအဓမ္မလုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကို ကျနော်တို့က အဓွမ်းကုန် တွန်းလှန်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ့။
VOA – ကိုဝေမိုးနိုင်ကော မစိုးရိန်ဘူးလား? ကြောက်စိတ်မဝင်ဘူးလား?
ကိုဝေမိုးနိုင် – ဟုတ်ကဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ ကျနော်၂၀၁၄ လောက်ကစပြီး ကျနော်လည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုထောင်အတန်းကျတာမျိုးကျနော့အနေနဲ့ အတွေ့အကြုံတကြိမ်မှ မရှိသေးပါ။ ဆိုတော့ ထောင်ထဲမှာ ဘယ်လိုတွေ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်၊ စစ်ကြောရေးမှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို စစ်အုပ်စုမျိုး ရက်ရက်စက်စက်ဖိနှိပ်လိမ့်ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့စာတွေ့လောက်ဘဲ ကျနော်တို့သိရပါတယ်။ ၁၉၈၈ ကြားကာလတွေတောက်လျှောက်မှာ ကျနော်တို့အရှေ့ကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို စာတွေ့သိရတဲ့အချိန်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျနော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကြောက်ပါတယ်။ ကျနော့အနေနဲ့ဆိုရင် လူငယ်ပိုင်းဖြစ်တယ်၊ ကျနော်ရှေ့ဆက်သွားချင်တဲ့ ကျနော့ရဲ့အိပ်မက်တွေရှိတယ်၊ ပန်းတိုင်တွေရှိတယ်။ ကျနော်သွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုဘဝကြီးနဲ့ကျနော်ဆုံးသတ်သွားမှာအင်မတန်ကြောက်ပါတယ်။ သို့သော် ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို အမှောင်ခေတ်မှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ ဒီကျနော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ကာလမှာ ကျနော်တို့လူငယ်တွေ ကျနော်တို့မျိုးဆက်တွေဟာ ဘယ်လိုမျိုးအမှောင်ခေတ်ကြီးထဲမှာနေခဲ့ရလည်းဆိုတာ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အဲ့ဒီကာလတခုကို ကျနော်တို့ပြန်မရောက်ချင်ဘူး။ ဒါပထမ တစ်ချက်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ စောစောက ကိုတေဇာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ခေတ်မှာ ဒီလိုမျိုး ဓမ္မနဲ့ အစမ္မတိုက်ပွဲကြီးက တိုင်းပြည်အနာဂါတ်နဲ့ရင်းပြီးတော့ ကြုံနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျနော်တို့မလုပ်ရင် ဘယ်သူတွေလုပ်ရမလဲ? ဆိုတော့ အဲ့ဒီမေးခွန်းဝင်လာတိုင်း ကျနော်တို့စိတ်ထဲမှာ မသိမသာဖြစ်စေ၊ သိသိသာသာဖြစ်စေ ဝင်နေတဲ့ကြောက်စိတ်တွေပေါ့ အလိုလိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်၊ ကျနော်တို့ယုံကြည်ချက်တခုနဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ့။
VOA – ဟုတ်ကဲ့ဗျား၊ ဆိုတော့ အခုဆိုရင်၊ ကိုတေဇာဆန်းဆိုရင် ဒါမန္တလေးဘက်မှာ၊ ကိုဝေမိုးနိုင်ဆိုရင် မုံရွာမှာ တင်မကတော့ဘူး ကိုယ့်ဒေသမှာတင်မကတော့ဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက နိုင်ငံတဝှမ်းကလူတွေက သိတဲ့သူတွေဖြစ်နေပြီ၊ ပြောရရင်တော့ ထင်ရှားလာပြီပေါ့နော်၊ ဆိုတော့ အဲ့လိုထင်ရှားလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်တိုင်အတိမ်းအစောင်းဖြစ်မဲ့ အန္တရာယ်ကပိုကြီးလာတယ်လို့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အဲဒီလိုမြင်မိပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကော ကိုတေဇာဆန်းစိုးရိန်စိတ်ရှိပါသလား? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောပြင်ဆင်ထားပါသလား?
ကိုတေဇာဆန်း – အဲ့တော့ဗျားပြောရရင် ကျနော်တို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကို ဒီစစ်အာဏာရှင်ကို ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ပြီးတော်လှန်ပြီဆိုကတည်းက ကျနော်တို့မှာ အားလုံးပါနော် ဒီရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်း နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း တယောက်ချင်းမှာ ကျနော်တို့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အန္တရာယ်တွေ အတိမ်းအစောင်းတွေကများစွာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ဒီအာဏာသိမ်းမှုလုပ်ရပ်ကို အာဏာရှင်စနစ်ကိုစပြီးတော့ တွန်းလှန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့စစဉ်းစားကတည်းက ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားပါတယ်၊ နောက် ကျနော့ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ပြောရရင် ကျနော့တဦးချင်းတယောက်ချင်းအတွက်ကတော့ ကျနော်က ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ရန်အတွက် ကျနော့အသက်နဲ့ခန္ဓာအထိ၊ ကျနော့အသက်အထိကျနော်ပေးဆပ်ဖို့ ပါဝင်ဖို့ကျနော်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ။ ဒီအတွက် ကျနော်က ကျနော့ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းတိုင်ပင်ထားပြီးသားပါ။ အဲ့တော့ပြောရရင် ကျနော်တို့က ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖို့အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ကြောက်ရွံ့နေမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့သေချာတယ် ကျနော်တို့ကကြောက်ခေတ်ထဲမှာ ၁၉၈၈လို ဟုတ်လား၊ ၁၉၆၂လို ကြောက်ခေတ်ထဲမှာ နောက်ထပ်မျိုးဆက် တစ်ဆက် နှစ်ဆက် ကျနော်တို့မသေမချင်း ကျနော်တို့သေတဲ့အထိသွားရတော့မယ်၊ ကျနော်တို့က ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ တစ်ခုခုကိုတွေဝေနေမယ် တုန်ဆိုင်းနေမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်လည်းပဲကျနော်တို့ဒီလိုအမှောင်ခေတ်ထဲမှာပဲကျနော်တို့နေရတော့မယ်။ ကျနော့အတွက်ကတော့ ကျနော့တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းအတွက် ကျနော်အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်ကာနေတရွေ့ ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်တိုက်ဖျက်ဖို့ရန်အတွက် ကျနော်ကစဉ်းစားထားပြီးသား၊ အပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ၅၅ သန်းသောပြည်သူတို့ရဲ့ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂါတ်အတွက် ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အတွက် ကျနော်တို့မလွှဲမတွေဆက်လက်ပြီးတော့ချီတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ့။
VOA – ကိုဝေမိုးနိုင်ကော ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတိမ်းအစောင်းဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်စိတ်ရှိသလား? အဲဒီအတွက်ကော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါသလား?
ကိုဝေမိုးနိုင် – ဟုတ်ကဲ့ အမှန်တိုင်းပြောရရင် စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ ကျနော့လူငယ်ဘဝမှာရှိနေသေးတဲ့အတွက် ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတစ်ခုနဲ့ကြုံရပြီးတော့ ဘဝဆုံးသွားမဲ့အနေထားမျိုး ကျနော့အနေနဲ့စိုးရိမ်တယ်၊ သို့သော် စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ ကျနော်တို့အဲဒီအရာထက်ပိုကြောက်ရမဲ့အခြေအနေတခုကို ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုအောက်မှာ ကျနော်တို့အသက်တွေ ဘဝတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်၊ ထိပါးနှောက်ယှက်စော်ကားခံရတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့သမိုင်းမှာသက်သေထင်ရှားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကျနော်တို့ဘယ်လောက်ပဲ ဒီလမ်းကိုလျှောက်မယ်ဆိုကတည်းက ကျနော်တို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံရမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့အရှေ့မှာ သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်၊ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်၊ ဆိုတော့ ဒီလမ်းကိုစလျှောက်ကတည်းက ကျနော်တို့ အခုလိုမျိုး နာမည်ကြီးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်သော်လည်းပဲ ကျနော်တို့အခြေအနေတခုအရ ကျနော်တို့လူသိများလာတဲ့အနေအထားမှာ ကျနော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ လူတော်တော်များများကလည်း စိုးရိမ်ခဲ့လာကြတယ်၊ ကျနော်တို့အသိုင်းအဝိုင်းတွေကလည်း ပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်။ သို့သော် ကျနော်မြင်တာကတော့ အခုမြန်မာပြည်မှာ ဒီနေ့အချိန်ထိပဲ လူ ၆၀၀ ကျော် အသက်တွေ ပေးခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကျနော်နားလည်တာကတော့ ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကျနော်တို့ ရင်းနှီးရတာတွေ ပေးဆပ်ရတာတွေရှိရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက်လည်း ကျည်ဆန်တွေမှာ နာမည်တွေ မှတ်ပုံတင်တွေမေးပြီးတော့လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အခြေအနေအချိန်ခါဆိုတာလည်း တချိန်မဟုတ်ချိန်ရောက်ကောင်းရောက်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အတွက် စထွက်ကတည်းကတော့ ဒီလမ်းကြောင်းအားလုံကို ကျနော်တို့ကြိုတွေးပြီးတော့ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်၊ ကျနော်တို့ လုပ်စရာရှိတာကို အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲတရွေ့ပေါ့နော် ကိုတေဇာပြောသလိုပဲ လုပ်စရာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲ ကျနော်တို့ဆက်လျှောက်သွားချင်တယ်။ အဲ့ဒါကပဲ ကျနော်တို့တွေရဲ့ သမိုင်းမှတ်ကျောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျား။
VOA – ဟုတ်ကဲ့ဗျား အခုဆိုဒါ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလရောက်ပြီပေါ့နော်၊ သင်္ကြန်ပွဲတော်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပဲ ကိုဗစ်ကြောင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်စည်စည်ကားကားမရှိခဲ့ဘူး၊ ယင်းမတိုင်ခင်နှစ်တွေကဒါ သင်္ကြန်ပွဲတော်ဆိုတာ မန္တလေးသင်္ကြန်ဆိုတာလည်း အင်မတန်တနိုင်ငံလုံးကလူတွေ သိပ်ပြီးတော့က ိုပါဝင်ချင်တဲ့ ပျော်ရွှင်ချင်တဲ့ပွဲတော်ကြီး၊ ဒီနှစ်မှာကတော့ ကျနော်တွေ့နေရတာအခု ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ မလုပ်ဘူး သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ၊ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်းမှာ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့သပိတ်မှောက်တာတွေ၊ ဆန္ဒပြတာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီး ပြောတာဆိုတာတွေ ကျနော်တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုတော့ ကိုတေဇာဆန်း သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်းမှာ လုပ်ဆောင်မှာတွေနဲ့ပက်သက်လို့ ဘာများပြောလို့ရပါမလဲခင်ဗျာ့၊ ပြောလို့ရသလောက်။
ကိုတေဇာဆန်း – ဟုတ်ကဲ့။ အဲ့တော့ ဟုတ်ပါတယ်၊ကျနော်တို့ သင်္ကြန်အခါတော်ဆိုတာ ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်အခြေအနေမှာတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် အင်မတန်အထူးမြတ်တဲ့အချိန်အခါပေါ့၊ အနားယူတဲ့အချိန်၊ အပန်းဖြေတဲ့အချိန်၊ သို့သော် ကျနော်တို့ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ဗျားအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါ၊ ကျနော်တို့ဒါသည် ဘယ်လိုကျနော်တို့ ပျော်ပါးနေရမဲ့ အပျော်သင်္ကြန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့အားလုံးနားလည်ထားပြီးသားပါ။ အခုတစ်ဦးချင်းတယောက်ချင်းကို နာလည်ထားပြီးသားပါ။ ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကျနော်တို့ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူဟာ ၇၀၀ကျော်ရှိပြီ၊ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ထောင်ကျနေတဲ့သူ ၃၀၀၀ကျော်သွားပြီ၊ တခြားထိခိုက်နစ်နာခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီလူတွေရဲ့ အသက်တွေ၊ သွေးတွေ၊ ချွေးတွေ ကျနော်တို့ မပြီးပြတ်သေးတဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကို ကျနော်တို့စိတ်မှာရှိသောအားဖြင့် ကျနော်တို့ ဒီသင်္ကြန်သည် အပျော်သင်္ကြန်၊ ပျော်စရာသင်္ကြန်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အတွက်ကတော့ ဒီသင်္ကြန်သည်တော်လှန်သင်္ကြန်သာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ဘာကိုတော်လှန်ရမလဲ၊ ကျနော်တ ို့ ဒီစစ်အာဏာရှင်ကို ဒီအာဏာသိမ်းမှုကို ကျနော်တို့ အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ကျနော်တို့ဆက်လက်တော်လှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က သင်္ကြန်အခါတော်အတွင်းမှာလည်းပဲ ကျနော်တို့အခုရက် ၇၀ကျော် ကျနော်တို့ပြသပြီးသား၊ ကျနော်တို့ရဲ့ အရေးတော်ပုံအတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ဆက်လက်တော့ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရေရမယ် ခုခံနေရမယ်၊ တော်လှန်သောသင်္ကြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီသင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာလည်းပဲကျနော်တို့သင်္ကြန်သပိတ်တွေကို ပုံစံအမျိုးစုံနဲ့သင်္ကြန်နဲ့ဆီလျော်လိုက်ဖက်တဲ့ ပုံစုံမျိုးစုံနဲ့ကျနော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ့။
VOA – ကိုဝေမိုးနိုင်တို့ကော မုံရွာဘက်မှာကော ဘယ်လိုများပြင်ဆင်ထားပါသလဲ?
ကိုဝေမိုးနိုင် – ဟုတ်ကဲ့။ ကိုတေဇာဆန်းပြောသွားသလို့ပါပဲ ကျနော်တို့ဒီ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ဒီမြို့ကြီးတော်တော်များများက သပိတ်ကော်မတီတွေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ ကျနော်တို့ဒီ သင်္ကြန်ကို တော်လှန်သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ တရက်ချင်းစီအလိုက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံမျိုးမျိုး ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ကျနော်တို့က ဒီကာလမှာ ကျနော်တို့သင်္ကြန်ဆိုတာက များသောအားဖြင့်တော့ ကျနော်တို့ပျော်ကြပါးကြတယ၊် နှစ်သစ်ကိုကြိုကြတယ်၊ မင်္ဂလာယူကြတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ ဒီကာလမှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့တော်လှန်ရေးသဘောဆောင်တဲ့ အသွင်ဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ တော်လှန်သံချုပ်တွေ၊ တော်လှန်ရေးသီချင်းတွေဆိုကြမယ်၊ လမ်းပေါ်လှုပ်ရှာမှုကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ တတ်နိုင်သမျှအရှိန်ဆက်ထိန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ သင်္ကြန်ကိုဆင်နွှဲမယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုချင်တယ်။ ကျနော်တို့နွေဦးတော်လှန်ရေးက ရေရှည်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ဟောင်းနဲ့နှစ်သစ်အကူးအပြောင်းကာလမှာလည်း တော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန်ကို မပျက်စေပဲနဲ့ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ချီတက်ချင်တယ်။ နှစ်သစ်မှာ နှစ်ဆန်း ၁ရက်နေ့လိုမျိုး နှစ်သစ်ကာလမှာလည်း ကျနော်တို့တော်လှန်ရေးရှေ့ဆက်ချီတက်ရမဲ့လမ်းခရီးကို ရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပေါက်မြောက်တဲ့အထိ ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြမယ်၊ စရှိသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တော့ ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျား။
VOA – ဟုတ်ကဲ့ပါဗျား၊ အချိန်ပေးပြီးတော့ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ ကိုတေဇာဆန်၊ ကိုဝေမိုးနိုင်၊ နှစ်ယောက်စလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘေးရန်အန္တရာယ်ပေါင်းက ကင်းဝေးကြပါစေ။ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းတက်နိုင်ကြပါစေဗျား။
ကိုတေဇာဆန်း+ကိုဝေမိုးနိုင် – ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော်တို့ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား
Original Post: VOA Burmese News